mm_Findastore
Home အူရီဒူးအကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ သတင်း
နောက်ဆုံးရ Ooredoo သတင်းများနဲ့ မျက်ချေမပြတ်ရှိကြစို့
အူရီဒူးသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနှစ်သက်ဖွယ်ရာ လက်ဆောင်အစီစဉ်ဖြစ်သည့် “မိုမို-My Ooredoo My Offer” ကို စတင်မိတ်ဆက်
အူရီဒူးမြန်မာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများအတွက် သီးသန့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်ပေး
အူရီဒူး သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှု စင်တာမှ ၄င်း၏ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Stevie Awards နှစ်ခုကို ထပ်မံလက်ခံရရှိ
အားလုံး ရွေးရန် 2013 2014 2015 2016 2018 2019
အားလုံး ရွေးရန် ဇန်နဝါရီ ဖေဖော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် သြဂုတ် စက်တင်ဘာ အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ
အားလုံး ရွေးရန် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ ဆုများ လူမှုဝနးကျင်ဆိုင်ရာသတင်းများ ဘောလုံး ယေဘုယျသတင်းများ နည်းလမ်းသစ်တီထွင်ရှာဖွေမှုများ နောက်ဆုံးရသတင်းများ ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှု ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုများ နည်းပညာ လူငယ်ထု
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ ပူးပေါင်း၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အသိပညာမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုစတင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) - မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများဖြစ်သည့် MPT၊ Ooredoo ၊ Telenor နှင့် MyTel တို့ ပူးပေါင်း၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုများအတွက် မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် ၎င်းတို့၏ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှုန်းထားများကို တိကျစွာ သိရှိနိုင်စေရန်အပြင် အင်တာနက်သုံးစွဲချိန်တိုင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော အင်တာနက် အသုံးပြုမှု ပမာဏများအတွင်းမှ ဒေတာများလျော့နည်းသွားခြင်း (သို့မဟုတ်) အသုံးမပြုသော်လည်း ဖုန်းဘီလ်များ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းများမှ ကင်းဝေးနိုင်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများထံသို့ အသိပညာပေးမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆက်သွယ် ရေးကဏ္ဍအတွင်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာများစွာအားထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုရလဒ်မှာလည်း ကောင်းမွန် စွာမြင့်တက်လာရုံသာမက မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်း သုံးစွဲသူဦးရေမှာ တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက် လာလျက်ရှိသည်။ 3G နှင့် 4G အင်တာနက်ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် နေ့စဉ် ဆက်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် သန်းပေါင်းများစွာသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လူမှုကွန်ရက်များ အသုံးပြုရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုခြင်း၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာသတင်းများဖတ်ရှုခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် များစွာသောအသုံးတည့်သည့် မိုဘိုင်းလ်အက် ပလီကေးရှင်းများကို နေ့စဉ်ဝင်ရောက်အသုံးပြုရာတွင်ဖြစ်စေ လူနေမှုဘဝများအတွက် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး လူထု၊ အသိုက်အဝန်းနှင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို သယ်ဆောင်လာလျက်ရှိပါသည်။
သို့သော်လည်း အချို့သောသုံးစွဲသူများမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ရာတွင် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းစနစ် (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုမှုအနေအထားများက မရည်ရွယ်ဘဲနှင့် ဖုန်းဘီလ်များဖြတ်တောက်ခံရခြင်း (သို့မဟုတ်) ဒေတာများ ကုန်ဆုံးသွားခြင်းအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း သတိမပြုမိခြင်းများ ရှိနေတတ်ပါသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာများအား ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲသူများအတွက် မှန်ကန်သော အင်တာနက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုပုံနှင့် မလိုလားအပ်ဘဲ ဒေတာများကုန်ဆုံးခြင်းမှလျော့ချနိုင်စေရေးနှင့် ဖုန်းဘီလ် ဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ဖြည့်သွင်းလိုက်သည့် ပမာဏငွေများ လျင်မြန်စွာမကုန်ဆုံးသွားစေရေး အစရှိသည့် နည်းလမ်းများကို အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် မလိုလားအပ်ဘဲ ဒေတာများကုန်ဆုံးခြင်းမှလျှော့ချနိုင်စေရေး နည်းလမ်း (၁၀) ချက်
၁. အလိုအလျောက် Update ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိတ်ထားပါ။
ဖုန်းအတွင်းမှ အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ခြင်းကိုပိတ်ထားရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းက သင့်ဖုန်း အတွင်းမှ ဒေတာများကို သင်သတ်မှတ်ထားသကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အသုံးပြု လိုက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
၂. အက်ပလီကေးရှင်းများကို WiFi ဖြင့်သာ Update လုပ်ပါ။
များစွာသောမိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုသူများက ၎င်းတို့၏ အက်ပလီကေးရှင်းများကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဒေတာ ဖြင့် update ပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသော်လည်း ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက ဖုန်းအတွင်းရှိ အက်ပလီ ကေးရှင်းများကို အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာပမာဏများစွာကို အသုံးပြုလိုက်နိုင်ပါသည်။
၃. Background ဒေတာများကို ကန့်သတ်ထားပါ။
အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများသည် ဖုန်းအသုံးမပြုသည့်အချိန်များ၌ပင် ဒေတာပမာဏများ စွာကို အသုံးပြုနေလျက်ရှိခြင်းကြောင့် မိမိတို့အသုံးမပြုတော့သည့် အက်ပလီကေးရှင်းဟောင်း များကို ဖုန်းအတွင်းမှ ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄. မိမိတို့၏အကောင့်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဒေတာများထပ်တူကူးယူနေမှုရှိ/မရှိ သတိပြုပါ။
အများအားဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအများစုမှာ ဒေတာများအား တစ်ခုမှ တစ်ခု သို့ ထပ်တူကူးယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှာ မိမိတို့ အသုံးမပြုသော်လည်း ကနဦးကတည်းကပင် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
၅. အွန်လိုင်းကြော်ငြာ (Ads) များကို ရှောင်ရှားပါ။
အွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှာ မိမိတို့၏ အင်တာနက်ဒေတာအများအပြားကို ကုန်ဆုံးသွားနိုင်စေသည် ကို သတိပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၆. ပေါ့ပါးပြီး ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်းသော Browser များကိုသုံးပါ။
ဖုန်းအတွင်း အလိုအလျောက်ပါဝင်သည့် အင်တာနက်ရှာဖွေရေးဆိုက် (Browser) များမှာ ဒေတာ အသုံးပြုမှုများပြားတတ်ခြင်းကြောင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်းသည့် Browser များကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါ။
၇. အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုများအတွက် သတိရှိပါ။
အွန်လိုင်းမှ ဗွီဒီယိုများ၊ သီချင်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အသံဖိုင်များ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ဒေတာအများအပြားကို ကုန်ဆုံးသွားစေနိုင်သောကြောင့် ဖုန်း အတွင်း ခံစားမှုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိသည့် အရည်အသွေးလျှော့ချထားသည့် ဗီဒီယို များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၈. ဒေတာမည်မျှအသုံးပြုမည်ကို ဖုန်းအတွင်း ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားပါ။
မိမိတို့၏ဖုန်းများအတွင်း ဒေတာကို မည်မျှသာအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း လွယ်လွယ်ကူကူ ကန့် သတ် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး ၎င်းက မက်ဂါဘိုက်များပိုမိုသက်သာသွားစေမည်ဖြစ်ကာ အပိုအသုံးပြု ခြင်းများအတွက် မတန်တဆငွေပေးချေရခြင်းများမှလည်း သက်သာသွားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၉. ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ဗီဒီယိုများ အလိုအလျောက်ပြသခြင်းစနစ်ကို ပိတ်ထားပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်၏ စာမျက်နှာကို အောက်သို့ဆွဲလိုက်စဉ် ဗွီဒီယိုများ အသံနှင့်တကွ အလိုအလျောက်ပြသ နေခြင်းစနစ်မှာ ဒေတာများကုန်ဆုံးခြင်းသာမက ရုတ်တရက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင် သောကြောင့် ၎င်းစနစ်ကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ဒေတာများကုန်ဆုံးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁၀. ဒေတာပမာဏသတ်မှတ်ပေးထားသည့် ပက်ကေ့ခ်ျများကို သုံးပါ။
ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျများမှာ သုံးစွဲသူများ၏ ဖုန်းဘီလ်ကို များစွာသက်သာနိုင်စေသကဲ့သို့ အော်ပရေ တာများအနေဖြင့်လည်း သုံးစွဲသူအမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်မည့် ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျအမျိုး အစားများစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပက်ကေ့ခ်ျများမှာ သုံးသလောက်ပေးစနစ် ထက် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာစေနိုင်ပြီး မိမိတို့၏ ကုန်ကျမှုများကို လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာများမှတစ်ဆင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ ဒေတာအသုံးပြုမှုများ ကို မည်ကဲ့သို့ထိန်းချုပ်သုံးစွဲနိုင်စေရေးများအား အကြံပြုလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှာလည်း ၎င်းတို့၏ ဖုန်းဘီလ်များကို မည်ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲသူများအားလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စမတ်ဖုန်း setting များကို ပြန်လည် စစ်ဆေးရန်နှင့် အင်တာနက်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားစဉ် ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်တိုင်း ထွာသည့် အလေ့အကျင့်မျိုးထားရှိတတ်စေရန် အော်ပရေတာအားလုံးမှတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အထက်ပါ အထောက်အကူအချက်အလက်များ၏အကူအညီဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် ယခင်ထက် ပိုမိုဂရုပြုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အွန်လိုင်းအခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများကို များစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့် ခံစားမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းဘီလ်ဖြတ်တောက်မှုများ၊ လက်ကျန်ငွေပမာဏကိစ္စများ၊ ဒေတာအသုံးပြုမှု နှင့်အခြားကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံသိရှိလိုပါက သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာအသီးသီး၏ တရားဝင် ဖေ့စ် ဘွတ်စာမျက်နှာများ (သို့) ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Call Center များသို့ ခေါ်ဆို၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။